ပီတိ: ပီတိ ၃၁ ဘယ်လိုစ
ပီတိ ၃၁ ဘယ်လိုစ
Blog ဆိုတာကို လွန်ခဲ့တဲ့ ၃နှစ် လောက်ကကြားခဲ့ဘူးတာ။ ကြားပြီး ၁ ပတ်လောက် နေတော့ blogspot.com မှာ မှတ်ပုံတင် ပြီးတော့ ဘာမလဲမလုပ်ဖြစ်။
အဲ့ဒါနဲ့ Blog ကိုဖျက်လိုက်တာ။ Friendster မှာ ခံစားချက်တွေကို blog ရေးဖူး ခဲ့ပါတယ်. ဒါပေမယ့် အင်္ဂလိပ်လို ရေးရတာ သိပ်အားမရ၊ မြန်မာလို ကြတော့ မရိုက်တတ်၊ ကိုယ်တိုင်ကလဲ ပျင်းရမှာတောင် ပျင်းတဲ့ သူ။ ဒီလောက် စာလေး မြန်မာလို ရိုက်တာ ၁ နာရီလောက် ကြာတယ်။ တော်တော် စိတ်ပါနေ လို့ လုပ်ဖြစ်တာ။ ကိုရဲမွန် ကို မြန်မာလို ရိုက်ရတာ မလွယ်ဘူးလို့ ပြောတော့ learning curve ပေါ့လို့ ပြန်ပြောတယ်။ learning curveဆိုတယ့်အကြောင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကိုရဲမွန် နဲ့ ကျွန်တော့် မှာ ဇာတ်လမ်း ရှိတယ်လေ။
ဘာပဲပြောပြော ကျွန်တော့်ရဲ့ ပထမဆုံးသော မြန်မာလို Post အတွက် အားပေးတာ ကျေးဇူး တင်ပါတယ်။
Posted by P.Ti at Friday, May 18, 2007
ကိုပီတိ ၃၁... လာလည်သွားပါတယ် ။ Hiking club က ထင်တယ် ။ ကျမလည်း ဗမာပြည်မှ တောင်တခုကို တက်ဖို့ စဉ်းစားနေပါတယ် ။ Have u been to Mt. KK in Sabah? I wroteapost on that on my blog. Can you recommend any nice place similar to that? Maybe not so high.. as I actually suffer from height sickness.
ကိုရဲမွန်နဲ့ learning curve ဇာတ်လမ်း ရေးပါဦးး)
Thanks GyitTu for visiting here...You can call me Peti which I'd like to be called. Yeah, I have read most of your posts including Mt. KK trip. I have never been to there. You areavery good writer. Surprised me that even though you are living in SG for so long yet you still can write likeaprofessional.
As you know facilities in our country is bad, every mountain will not be easy for you. I'd suggest you go for trekking in InnLay lake area. If you really want to do mountaineering, Mt. Victoria in Chin State should be fine. YUHM will always go there onceayear since 1996. Please bear in mind that there is no facility in there but you can get memorable experience.
:D I will write the story of learning curve... and also my feelings, my thoughts experiences and renewing my old posts...
Thanks again...you guys inspired me to write ;)
ကိုပီတိ.. I did check out the innlay trekking when i went back recently. I will check out ur suggestion.
thanks for ur comment on my writing. I look f/w to ur posts then.
သြော ပီတိ ပီတိ။ ဒီမှာ တိတ်တိတ်လေး လာရေးနေတာကိုး။ အသိနောက်ကျလေခြင်း။ မောင်ရင် ကိုယ့်အကြောင်းတွေ ဖော်ဖို့တော့ ယောင်လို့တောင် စိတ်မကူးနဲ့နော။ စနိတ် စနိတ် စီးသယ် လိပ် တဲ့။ ကြားဖူးတယ် မဟုတ်လား။ :(
ကိုမင်းရေ၊ ကျွန်တော် နားလည်တယ်။ တယောက်နဲ့တယောက် ခွချက် ထားတယ်ဆိုတာ…
finally get to read ur first post!
a very happy belated birthday for this blog pop!
so far so goodie good pop :D
i cantba gd author norapoet,
but at least i canba gd reader!
jia you peti..jia jia you..